» “जति कोशिस गर्दा पनि हातमा, पैसा टिक्दैन ? पर्समा यी ५ चमत्कारी चीज,राख्नुहोस् तपाईलाई धनी बन्नबाट कसैले रोक्न सक्दैनन्” “जति कोशिस गर्दा पनि हातमा, पैसा टिक्दैन ? पर्समा यी ५ चमत्कारी चीज,राख्नुहोस् तपाईलाई धनी बन्नबाट कसैले रोक्न सक्दैनन्” – हाम्रो खबर
“जति कोशिस गर्दा पनि हातमा, पैसा टिक्दैन ? पर्समा यी ५ चमत्कारी चीज,राख्नुहोस् तपाईलाई धनी बन्नबाट कसैले रोक्न सक्दैनन्”
हाम्रोखबर संवाददाता 438 Views
“धेरै भन्दा धेरै धनसम्पति कमाउने चाहाना कसलाइ नहोला र?जसको लागि मानिसहरू कडा मेहेनत गर्न पछि हट्दैनन। तर लाखैा कोशिस गर्दा पनि हातमा पैसा टिक्दैन । समुद्र शास्त्रमा यो बताइएको छ कि केही खास चीज यदि गोजीमा राख्नाले धन सम्पति टिकाउ हुने गर्दछ। यी पाँच चीजहरू गोजीमा राख्नाले तपाइको गोजी कहिले खाली हुने छैन।”
आफ्नो पर्स,मा धनकी देवी माता लक्ष्मी को तस्बिर राख्नुहोस। माता लक्ष्मी को कृपाले तपाइको आफ्नो पर्स कहिले खाली हुने छैन। साथसाथै अन्य धन कमाउने कयौ मौका मिल्दछ।
आफ्नो गोजीमा, कमलको दाना अर्थात् कमलको बिजको दाना राख्नाले तपाइसग पोइसा को कमि कैले हुने छैन। माता लक्ष्मीको कृपा सधैं सधैं रहिरहने छ ।पर्समा अक्षता राख्नाले पनि बडि भन्दा बडी फाइदा हुन्छ। भानिन्छ कि पर्समा थोरै चामल राख्नाले फजुल खर्च रोकिन्छ।
“गोजीमा श्रीयंत्र राख्नाले पैसा सग जोडिएका सबै काम कुराहरुमा फाइदा मिल्दछ। यसलाई सधै आफ्नो पर्स मा राख्नुहोस।पर्समा,सानो ऐना राख्नाले पनि धनको बचत हुन्छ। तपाइको पैसा फजुलमा खर्च हुने छैन र साथै जागिरमा पनि बढुवा हुन्छ।